Ngale nsiza ungaqhuba usetyenziso lweWindows kwiChannelbook | Iindaba zeGajethi
Iincwadi zeChannel zithandwa kakhulu eMelika, ngakumbi kwicandelo lezemfundo. Ngamaqela ekulula ukuwasebenzisa, ukuthutha kunye nexabiso lawo - kuxhomekeke kwimodeli- iphakathi. Xa zizonke zizenza zibe nomtsalane kwigumbi lokufundela. Ngoku, ngaphandle kwazo izinto ziyatshintsha; abasebenzisi baneemfuno ezahlukeneyo. Kwaye izicelo ezisekwe kwi-Intanethi azonelanga kwimfuno ephezulu.
Kwiinyanga ezidlule izinto ziphuculwe kunye nethuba lokusebenzisa ii -apps ze-Android; Oko kukuthi, ukukwazi ukufaka ivenkile yesicelo seGoogle Play kwiChannelbook kwaye ke unike usetyenziso oluncinci. Ubuncinci, ngaphandle kokusebenzisa uqhagamshelo lwe-Intanethi ngalo lonke ixesha. Kodwa masingazenzi ngokwethu: iqonga eliphambili kwihlabathi liphela liWindows. Kwaye uthanda okanye ungathandi, abasebenzisi abaninzi abasebenza kude kufuneka basebenzise usetyenziso lweWindows. Zonke zingene kuGoogle Play Isicelo esiza kukuvumela ukuba uqhube iiWindows kwiChannelbook.
Igama lesi sicelo ngu CrossOver. Oku kuyakuvumela sebenzisa iinkqubo zeWindows kwiChannelOS. Nengqondo, i-Chromebook yakho kufuneka isekwe kwiprosesa ye-Intel. Kwakhona, le projekthi, okwangoku ikwi-beta, ayilungisiwe ngokupheleleyo, ke kuya kufuneka ulinde uhlaziyo olutsha kwixa elizayo. Kodwa abaphuhlisi sele belumkisa ukuba ezi ziya kufika.
Ngoku, le app, esele ifumaneka kwamanye amaqonga, ihlawulwe. Nangona kunjalo, ngombono wokukwazi ukubonelela ngohlaziyo olutsha, bagqibe kwelokuba bavule i-beta esidlangalaleni simahla kwaye bahlupheke ngenxa yeebugs kwaye babike ukuba zeziphi na ezi ntsilelo. Okokugqibela, ndikuxelele ukuba le app isebenze kwiChannelbook yakho, I-laptop ye-ChromeOS kufuneka ihambelane neGoogle Play, kwaye ke, nge-Android. Nangona imodeli yakho ikhutshiwe kulo nyaka, Zolile ke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » Iilaptop » Ngale nsiza ungaqhuba usetyenziso lweWindows kwiChannelbook